Nnyocha Ọrụ - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Ihe mere nyocha ROCPLEX ji ka mma
Anyị nwere ọkachamara àgwà nnyocha otu na osisi osisi ihe.
Afọ 25 munufacturing na ahụmịhe nyocha na plywood, MDF, OSB, osisi melamine, ngwaahịa LVL.
100% Ọfụma, ọkachamara ma sie ike.
100% Ndị ọrụ nyocha.
Na-ekpuchi mpaghara mmepụta ihe nke China.
Anyị na-enye ọrụ kacha mma.
Nye akụkọ nyocha n'ime awa 12 mgbe nyochachara.
Anyị nwere ọnụahịa kacha mma.
Nwere Laboratory Board
Usoro ọrụ (na naanị ụzọ atọ, a na-eme nyocha ahụ）
Infrom anyị banyere ebe na ngwaahịa maka inspetion.
Anyị ga-eziga ndị nyocha ọkachamara n’ebe ahụ maka nyocha.
Ga-enweta akwụkwọ nyocha n'ime awa iri na abụọ.
Nnyocha Mbupu tupu oge (PSI)
A na-eme nnyocha nyocha tupu ngwaahịa ahụ 100% mechara na 80% juru. Anyị na-eme nyocha nlele na-enweghị usoro dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Na akụkọ ahụ tupu ebufee, anyị ga-egosipụta n'ụzọ zuru ezu mbupu ibu, ọnọdụ nkwakọ ngwaahịa na ma ogo ngwaahịa ahụ ruru ụkpụrụ.
Iji zere ihe egwu ọ bụla na iwu gị, gbaa mbọ hụ na ngwaahịa ịzụrụ zutere nkọwa gị na nkwekọrịta nkwekọrịta gị tupu ị kwụọ ụgwọ ngwaahịa ahụ.
Ihe nyocha ahụ gụnyere ụdị ngwaahịa, nha, ụcha, ọrụ, ọdịdị, ọrụ, nchekwa, ntụkwasị obi, usoro nkwakọ ngwaahịa, akara aha dị mkpa, ọnọdụ nchekwa, nchekwa njem na ihe ndị ọzọ ndị ahịa chọrọ.
N'oge Nnyocha Production (DPI)
Mgbe ngwaahịa bụ 50% dechara, anyị na-elele na inwale àgwà nke ọkara okokụre na okokụre ngwaahịa dị ka gị ngwaahịa nkọwa na-enye nnyocha nnyocha.
Oge nyocha a nwere ike inyere gị aka ikwenye ma ogo, ọrụ, ọdịdị na ihe ndị ọzọ achọrọ maka ngwaahịa a dabara na nkọwa gị niile n'oge usoro mmepụta ahụ, ọ bakwara uru maka nchọpụta n'oge na enweghị mmezu ọ bụla, wee belata igbu oge na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nnyefe nnyefe.
Ihe nyocha ahụ gụnyere nyocha akara mmepụta na nkwenye na-aga n'ihu, na-enyere ngwaahịa nkwarụ aka ka ọ dịkwuo mma n'oge kwesịrị ekwesị, na-enyocha oge nnyefe, na-enyocha ngwaahịa ndị emechara na usoro mmepụta ọ bụla, na ịlele ụdị, nha, agba, usoro, ọdịdị, ọrụ, nchekwa, ntụkwasị obi, usoro nkwakọ ngwaahịa, akara nyocha metụtara, ọnọdụ nchekwa, nchekwa njem na ihe ndị ọzọ ndị ahịa kwuru nke ngwaahịa ndị emechara.
Nnyocha Mmepụta Mbụ (IPI)
Mgbe ngwongwo gị mechara 20%, ndị nyocha anyị ga-abịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe nyocha ndị a.
Nke a nnyocha nwere ike izere ogbe nsogbu na isi ntụpọ na dum iji. Ọ bụrụ na enwere nsogbu, ịnwere oge iji melite ya iji hụ oge nnyefe na ogo ngwaahịa.
Ihe nyocha ahụ gụnyere ikwado atụmatụ mmepụta, inyocha ụdị ngwaahịa ahụ, ogo, agba, usoro, ọdịdị, ọrụ, nchekwa, ntụkwasị obi, usoro nkwakọ ngwaahịa, akara aha dị mkpa, ọnọdụ nchekwa, nchekwa njem, yana ihe ndị ọzọ ndị ahịa chọrọ.
Nnyocha zuru ezu & Nnabata nnabata
Enwere ike ịme nyocha niile tupu ma ọ bụ mgbe nkwakọ ngwaahịa dị ka ihe ndị ahịa chọrọ. Dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, na ụlọ ọrụ nyocha nke ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ na ebe ndị ahịa zubere, anyị ga-enyocha ọdịdị, ọrụ na nchekwa nke ngwaahịa ọ bụla; ọdịiche dị mma na ngwaahịa na ngwaahịa ọjọọ na nyocha dịka iwu chọrọ ndị ahịa si dị.
Ma kọọrọ ndị ahịa nsonaazụ nyocha ahụ n'oge. Mgbe nyochachara, ngwaahịa ndị dị mma na-agbanye n'ime igbe ma jiri akara pụrụ iche mechie ya. A na-ekewa ngwaahịa ndị nwere nkwarụ wee laghachi na ụlọ ọrụ ha.
ROC na-eme ka o doo anya na ngwaahịa ọ bụla ebupuru ga-emezu ihe ị chọrọ: Anyị ga-enye data nzaghachi gụnyere:
Akụkọ nyocha niile, foto ndị metụtara ya, ọnọdụ ndị na-adịghị mma, ihe kpatara ya, ihe mgbochi, na ụzọ nhazi ụlọ ọrụ nyocha ROC na-elekwasị anya na nyocha nke ahịa ndị Japan. Mmechi siri ike nke sistemụ njikwa ụdị Japanese, yana ndị ọrụ nyocha ọkachamara na ebe nyocha a na-achịkwa, nwere ike ịnye gị ọrụ nyocha zuru oke na ụlọ ọrụ nyocha.
Nlekota oru (PM)
E zigara ndị nyocha na ụlọ ọrụ ahụ site na mmalite nke mmepụta iji soro ma kwado usoro mmepụta niile, ogo, na mmepe mmepụta.
Nyochaa ma chọpụta ihe kpatara emeputa ihe na-adịghị mma, mee ihe mgbochi maka ihe kpatara ya, kwado mmejuputa ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ma kọọ akụkọ niile maka ndị nrụpụta n'oge kwesịrị ekwesị.
Achọpụtara ntụpọ ngwaahịa yana ọganihu mmepụta n'oge n'oge usoro mmepụta ahụ, yana atụmatụ imezi oge iji hụ na ngwaahịa gị nwere ike ịmepụta nke ọma na usoro mmepụta.
Ihe nyocha ahụ gụnyere njikwa ọganihu mmepụta, njikwa akụkụ na njikwa n'oge nrụpụta, ihe ndị achọrọ maka ụlọ ọrụ, nkwenye nke mmejuputa ndozi, nkwenye nke nsonaazụ mmejuputa, nzaghachi oge na ọnọdụ mmepụta na ọnọdụ ndị na-adịghị mma.
Nyochaa ụlọ ọrụ (FA)
Dika ihe odide achọrọ, ndi nyocha ROC ga-enyocha ntukwasi obi azụmaahịa nke ndi na emeputa ihe, ikike imeputa ya, sistemu njikwa ihe banyere ya, nyocha oru ndi mmadu, yana nhazi ulo oru na onodu mmeputa.
Anyị na-enyocha ụlọ ọrụ anyị ka ị nwee ike ịhọrọ ezigbo ndị na-eweta ngwaahịa.
Nyocha a gụnyere ikikere azụmaahịa ụlọ ọrụ, asambodo ụlọ ọrụ na nyocha njirimara, ụlọ ọrụ kọntaktị ụlọ ọrụ na ọnọdụ, usoro nhazi ụlọ ọrụ na ọnụ ọgụgụ, akwụkwọ na njikwa usoro, ọzụzụ n'ime, akụrụngwa na njikwa ngwaahịa, nyocha ụlọ na nyocha, yana ikike mmepe, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ọnọdụ akụrụngwa, ikike imepụta ụlọ ọrụ, ịhazi na ọnọdụ nkwakọ ngwaahịa, mmezi ngwa ọrụ na ndozi mmezi, nnwale ọla, sistemụ njikwa mma, ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, biko rụtụ aka na ndepụta nyocha ụlọ ọrụ ROC maka nkọwa.
Akpa Ikwado Nlekọta (CLS)
Ọrụ nlekọta gụnyere nyochaa ọnọdụ nke akpa ahụ, ịlele ozi ngwaahịa, ịlele ọnụọgụ nke ngwaahịa ndị a na-etinye n'ime akpa ahụ, ịlele ozi nkwakọ ngwaahịa, na ilekọta usoro ntinye akpa niile, na-ahọpụta igbe nke ngwaahịa iji lelee ọdịdị na ọrụ.
Iji zere nnukwu ihe egwu nke itinye ngwaahịa na-ezighi ezi ma ọ bụ nke mebiri emebi, ma ọ bụ na-ezighi ezi, wdg. Ndị nyocha na-enyocha ebe a na-ebugharị iji hụ na ngwaahịa gị jupụtara.
Ihe nyocha ahụ gụnyere ịdekọ ọnọdụ ihu igwe, oge mbata akpa, nọmba akpa na nọmba ụgbọala na-adọkpụ; ma akpa ahụ mebiri emebi, mmiri ma ọ bụ nwee isi pụrụ iche, ọnọdụ nkwakọ ngwaahịa na mpụga; n’enweghị ego ịlele igbe nke ngwaahịa iji gosi na ha bụ ngwaahịa ndị chọrọ n’ezie ka e bugoo ha n’ime ihe ndị ahụ; elekọta akpa loading usoro iji hụ na kacha nta mmebi na jirichaa ohere itinye n'ọrụ; mechibidoro ihe ndi nwere akara akara; Ndekọ akàrà, na oge ọpụpụ akpa.
Ọkachamara na mbata osisi, n'ihi na anyị bụ ndị nrụpụta
Anyị bụ ndị nkwado siri ike maka njikwa njikwa tupu ị nweta ngwaahịa gị na China.
N'oge mmepụta, ọtụtụ ihe na nkọwa nwere ike ịgahie.
Chọta ụlọ ọrụ na-achịkwa njikwa mma bụ ihe ịga nke ọma.
ROC ọkachamara na osisi osisi ihe inspetion esi na ROC afọ 25 osisi osisi n'ichepụta ahụmahụ.
Nnyocha nyocha ROC nwere ike ọ bụghị naanị inyere gị aka ịkwado ma melite ogo ngwaahịa a, kamakwa ịme ka azụmahịa na ahịa gị sie ike, ma nyere gị aka iwulite aha ọma ka anyị jide n'aka na ndị ahịa gị
ROC nyocha uru
Belata ihe egwu dị na ngwaahịa maka nke kacha ala
Quality Akwa Ogo
Gbaa mbọ hụ na gị mmepụta àgwà na-enye mma jikoro ozugbo
Enyere gị aka ịhụ na ngafe ọnụego
◎ Bịara n'Ezi Oge
Gbaa mbọ hụ na oge nnyefe
Belata nsogbu gị na azụmaahịa gị
Enyere gị aka ịhọrọ ezigbo soplaya
Gbochie nsogbu okwu puru ime
Gbaa mbọ hụ na edoro ngwaahịa gị n'ime ihe ndị ahụ n'ụzọ ziri ezi na oke ziri ezi
Nnyocha Ọrụ Ngwaahịa
Ngwa osisi ndị ọzọ